आफ्नो भन्दा फरक स्वभावको साथिसँग जीवन बिताउनु पर्दा के गर्ने ?:: Mero Desh
आफ्नो भन्दा फरक स्वभावको साथिसँग जीवन बिताउनु पर्दा के गर्ने ?
Published on: १५ भाद्र २०७८, मंगलवार १४:०५
विज्ञान भन्छ, विपरित ध्रुबहरु आपसमा आकर्षित हुन्छन् । विज्ञानको यो सूत्र जीवनमा पनि काम लाग्छ। तर ईमान्दार हुनका लागि विज्ञानका अलावा, जीवनमा दर्शन पनि आवश्यक छ। निस्सन्देह, हाम्रो शरीर र दिमागले वैज्ञानिक ज्ञानको आधारमा धेरै हदसम्म काम गर्छ ।
उदाहरणका लागि यदि तपाईं अन्तर्मुखी स्वभावको हुनुहुन्छ भने तपाईं बहिर्मुखी स्वभावको व्यक्ति मन पराउनु हुन्छ । यदि तपाई चञ्चल प्रकृतिको मान्छे हुनुहुन्छ भने शान्त प्रकृतिको मान्छे धेरै मनपराउ हुन्छ । यसरी हामी आफ्नोभन्दा फरक स्वभाव भएका व्यक्तिलाई मनपराउने गर्छौं ।
धेरै अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् कि विपरीत स्वभाव सँग मानिसहरुको सम्बन्ध लामो समयसम्म रहन्छ। तर यो सिक्काको एक पक्ष हो, जो विज्ञानद्वारा सञ्चालित छ । तर हामी पहिले नै भन्दै छौं, हाम्रो जीवनमा एक दार्शनिक कोण पनि छ।जीवनको शब्दकोशबाट सही र ग’लतको धारणा ह’टाउनुहोस्
यदि तपाईं लामो समयका लागि कुनैपनि सम्बन्धमा रहन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले सही र गलतको धारणा बाट मुक्त हुनुपर्छ । मानौं तपाईं एक अन्तर्मुखी हुनुहुन्छ र तपाईंको साथी बहिर्मुखी छन् भने दुवै मानिसहरु पहिले एक अर्काको विपरीत स्वभावको कारण एकअर्काप्रति आकर्षित थिए।
तर समयसँगै, पा र्टनरको सानासाना कुराहरु रि’सा’उन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा हामी या त साथीलाई पनि आफू जस्तै बनाउन चाहन्छौं या त साथी जस्तै बन्न प्रयास गर्छौं । किनकि हामीलाई लाग्छ, दुईमध्ये एक राम्रो स्वभाव को छ र अर्को ख’रा’ब छ। यस मामलामा झगडा तपाईंहरू दुईको बीचमा हुन्छ।
यदि तपाईं वा तपाईंको साथी चुपचाप बसेरै तपाईंभित्र परिवर्तन ल्याउने चेस्टामा छन् भने थाहा पाउँदा हुन्छ तपाईंको स्वभावसँग ऊ रि’सा’ एको छ यही रि’स बाहिर निस्किएपछि एक आपसमा द्वन्द्व सुरु हुन्छ । त्यसैले फरक खालको व्यवहार भए पनि न त उसलाई परिवर्तन गराउनु हुन्छ न त आफू प रिवर्त हुनुहुन्छ । जो जस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ उस्तै राख्नु उचित हुन्छ ।
माथि भने जस्तै न ततपाईंले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ न त पार्टनरको स्वभावमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नु उचित हुन्न । तर दुबै मानिसहरु एक अर्कालाई आफ्नै शर्तमा छोडेर बाँच्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंको सम्बन्ध चाँडै तो’डिने हुन्छ । यदि पार्टनरलाई पार्टी मनपर्छ तर तपाईंलाई मन पर्दैन भने
बीचको बाटो यो हुन सक्छ कि पार्टनरले हरेक दिनको सट्टा एक दिन पार्टी गर्ने र तपाईंले पनि एकदिनको पार्टीमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ ।त्यस्तैगरी, तपाईंको छनौट को गतिविधिमा तपाईंको साथीलाई शामेल गर्नुहोस् । यस तरिकाले तपाईं दुवैले केही नयाँ सिक्न पाउनुहुनेछ। तपाईं पनि एक अर्कासँग गुणस्तरीय समय बिताउन पाउनुहुनेछ ।
यो नछुटाउनुहोस् कि तपाईंको पार्टनरले हरेक गतिविधिमा तपाईंलाई साथ दिएको हुनुपर्छ हरेक सम्बन्धमा दुवै जना को दृष्टिकोण एउटै खालको हुन्छ । उनीहरूको जीवन बोरिङ र निरस बन्छ । उनीहरु जीवनमा साहसिक काम गर्न सक्दैनन् । अर्कोतर्फ जब तपाईंहरू दुवैको विचार फरक प्रकारको हुन्छ भने
तब हरेक दिन तपाईंहरू दुवैले नयाँ तर्क सुन्न पाउनुहुनेछ । तपाईंहरू दुवैले हरेक कुरालाई नयाँ तरिकाबाट हेर्न पाउनु हुनेछ ।आफ्नो वैवा’हिक जीवनलाई खुसियाली बनाउनको लागि यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ जसले दुई जनाको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएराखोस् । जहाँ विचार फरक भए पनि भावनाले साइनो जोड्न सकियोस्।साभार : अनलाइनखबर